3D madani ah, nashqadeynta wadada, casharka 2 - Geofumadas
3D madani ah, naqshad jidka, cashar 2
Post post waxaan aragnay sida loo soo dejiyo dhibcooyinka, hadda waxaan arki doonaa sida loo kala shaandheeyo si ay fikrad fiican uga haystaan ​​waxa aan haysanno. Dhibcaha aan hayno waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
Inta soo hartay waxba ma hayaan, markaa waxaan u qaadaneynaa inay tahay dhul dabiici ah waxaana sidoo kale jira dhibco dhidibka dhexe oo lagu muujiyey saldhigyo 0 + 000 0 + 10, 0 + 20 ... ilaa laga gaarayo 0 + 650
Kala sooc qodobada xayndaabka
Waxa aan rabno waa inaan awoodi karnaa inaan aragno nooca dhibcooyinka sida ku saleysan sifooyinka miiska, sidaas daraadeed kooxda dhibcaha ah ee guji sax ah dooro "Cusub".
Kadibna waxaan ugu yeeri doonaa "Deedka" waxaanan wax ka beddeli doonaa sifooyinka barta (qaabka dhibicda) ee abuuraya qaab cusub oo qaabeynaya kuwan soo socda:
In "Macluumaadka" waxaan ugu yeeri doonaa "Cerco"
In "Marker" waxaan dooran doonaa X
In "Muujin" waxaan u beddeli doonaa midabka casaanka ah
Ka dibna waxaan "samaynaa"
Waxaanu la mid nahay calaamadda (tilmaanta astaanta calaamadda), kaliya kiiskan waxaan dooneynaa in aan qoraalka aan la arki karin iyo tan:
In "Macluumaadka" waxaan ugu yeernaa "Cadco Cerca"
"Layout" waxaan ku dooranay "lambarka tirada", "Tilmaanta tilmaanta" iyo "sare u qaadista" been. Midabku waa la beddeli karaa isla halkaas.
Hadda si aad u codsatid in qaabkani uu ku dhaco seerkabada aan doorano ee ku jira "Ku dar" tab in qoraalka uu ku jiro ereyga "CERCO", ka dibna waxaan dooranaynaa "ku dabaqi" oo ku hubi "Liiska Barta" ee qodobbada oo dhan waxay ku jiraan sharraxaaddaas.
Ka dibna waxaanu sameynaa ok waxaan arki doonaa in dhammaan qodobada xaydaanka ay leeyihiin orange-da midab-dhiska X-ga sida aan u qeexnay.
Waxaan isku mid noqon doonaa sifaha "CORREDERO", kiiskan ayaan ku siin doonaa wheel yar oo buluug ah, iyo sidoo kale waxaan dhigi doonaa magacyada, dhererka iyo lambarka.
Si aan u aragno isbeddelka aan dib ugu soo celinno "re" iyo "geli".
Haddii tallaabo hore ay kugu kacday, hadda waa inaad isku daydaa inaad dib u soo kabato, waa nidaam asaasi ah, oo abuuraya qaab gaar ah nooc kasta oo dhibcood ah.
Marka laga hadlayo farqiga waxaan u isticmaali doonaa midab cagaar ah, calaamad ahaanna waa laba jibbaaran oo aan lahayn sharraxaad. Blocks si fiican ayaa loogu isticmaali karaa tan, laakiin ma ahan mowduuca aan maanta ka hadlayo.
Dhibcooyinka dhul dabiici ah.
Taas awgeed, waxaan samayn doonnaa xulasho gaar ah, kiiskan oo aan ku jirin "ku dar" laakiin in "laga saaro", oo soo geliya kuwan soo socda:
Maxaa loola jeedaa waa in dhammaan qodobada aan ku jirin nooc kasta oo sharaxaad ah sida tan baxsan, ogeysii in ugu dambeyntii lagu sharaxay tallaabada xigta.
Waqtigan xaadirka ah shaqada waa in ay u egtahay sidan:
Dhibcaha xariiqda dhexe
Xaaladdan, waxa aan sameyno waa "ku dar", oo dhigaya 0 +
taas oo micneheedu yahay, in dhammaan saldhigyada ay leeyihiin eber, oo lagu daro calaamadda iyo astaamo kale ayaa la dooran doonaa. Taasna waxaan ku siin doonaa calaamad ka badan, waxaan ka tagi doonaa muuqaal kaliya oo saldhigga iyo kor u qaadista.
Anigu waxaan fahansanahay in aan shakhsi ahaan ugu baahnayn kharashka, laakiin waa habka lagu caddeeyo, inuu bedelayo guryaha si uu u ogaado wixii la bedelay. Ugu dambeyntii waa in ay sidan u egtahay:
Waad iska indha tiri kartaa tan, laakiin waxaan filayaa inay hadhow kugu kici doonto. Halkan waxaad kala soo bixi kartaa feylka aad horay ugu sii wado. Sida aad u aragto, waxaad horeyba u kala duwanaan kartaa fasallada qabashada ee kala duwan ee xarunta guud.
Post Previous" Hore 3D madani ah, naqshad jidka, cashar 1
Post Next 3D madani ah, samee iskudubarid (cashar 3)Next »
7 Jawaabaha "Rayidka 3D, Naqshadeynta Wadada, Casharka 2"
Uma baahnid inaad u mahadceliso Pablo, fikradahani waa in aqoonta wadaagista ay naga caawiso koritaanka iyo baaritaan dheeraad ah.
Tutorial aad u wanaagsan tahay macallin ka GREAT, mahad EE dowrka HELP GREAT WELI Nasiib oo horteena ah, Ilaahiinna ah ammaana.
orday isagu wuxuu leeyahay:
Aad aad uwanaagsan, dhab ahaantii ma garanayo marar badan, sidaa daraadeed wax badan oo sameysmay.
Christian isagu wuxuu leeyahay:
Sharaxaadaadu aad ayey ufiican tahay, soco, lammaane ,,,,
Gerardo Martinez isagu wuxuu leeyahay:
Ku riyaaqa duruusta 3d ee ku saabsan waddada. Waad ku mahadsantihiin faa'iidada aad u leedahay faa'iidadaada.
Si aad u dalbato saaxiib
Macallin weyn oo ah fasal buuxa oo ah CIVIL 3D, waxaa laga yaabaa in qof kale uu barto qaab-dhismeedka "excel template" iyo inuu wax ku biiriyo